Published at March 28, 2018 by Prof. Dr. Rebanta Kr. Bhattarai
डा. रेवन्त कुमार भट्टराई
कृषि तथा वनविज्ञान विश्व—विद्यालय, रामपुर, चितवन ।
वरिष्ठ बैज्ञानिक रुडोल्फ भरचुवले पशु तथा मानवको चिकित्सामा कुनै छुट्याउने रेखा छैन र हुनु पनि हुँदैन । फरक वस्तु मात्र हो, जसबाट प्राप्त अनुभवले चिकिस्सा विज्ञानको आधार तय गर्दछ । विश्व भरमा एक प्रकारका भन्दा बढि प्रजातीका जनावरहरुको उपचार गर्ने पशु चिकित्सकहरुको पशुपंछि तथा मानवमा लाग्ने रोगहरुको उपचारमा महत्वपूर्ण भुमिका पु¥याइ रहेका हुन्छन् । यो लेखमा पशु चिकित्सकले कस्ता किसीमका कार्यहरु गर्न सक्छन् भनि चर्चा गरिएको छ ।
आजका पशु चिकित्सकहरु विश्वमा पशुपंछि र मानवको स्वास्थ्य सम्वन्धि काम गर्ने गरि पढाई गर्ने गरेका हुन्छन् । यिनिहरु पशुको स्वास्थ्य र कल्याण (Welfare) आवश्यकता सम्बन्धमा विश्वभर कडा परिश्रम गरिरहेका छन् । साथै वातावरणीय सुरक्षा, अनुसन्धान, खाद्य सुरक्षा र जनस्वास्थ्यमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका निवाह गरेका हुन्छन् ।
क) पशु स्वास्थ्य र समाजको स्वास्थ्यको सुरक्षा
पशु चिकित्सकहरुले विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछन् । जस्तैः पशुपक्षिको उपचार (सरकारी वा निजी), शिक्षण तथा अनुसंद्यान, औषधि व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य, निजी व्यवसाय, प्रहरी तथा सैनिक सेवा आदि ।
ख) निजी तथा सरकारी स्तरमा पशु पंक्षिको उपचार
पशु चिकित्सक मध्ये दुईतिहाइले निजी तथा सरकारी स्तरमा धेरै प्रकारका घरपालुवा पशुपंक्षी तथा जंगली जनावरको रेखदेख तथा व्यवस्थापनमा संलग्न रही गोठदखि ओठसम्म भन्न्े नाराको साथ राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने पशुजन्य प्रोटिन उत्पादन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको पाइन्छ ।धेरै जसोले गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा, बंगुर जस्ता धेरै प्रकारका जनावरहरुको उपचारमा संलग्न रहेको पाइन्छ । केहिले पराम्परागत तथा वर्णशंकर घरपालुवा जनावर जस्तैः कुकुर, विरालो, चरा, सानो जनावरहरु (ह्यामस्टर, गिनी पिग), रेप्टाइल्स र माछा हरुको उपचारमा संलग्न पाइएको छ । केहीले घोडा तथा खच्चडको उपचार गरेको पाइन्छ ।
ग) शिक्षण तथा अनुसंन्धान
शिक्षण पेशामा रहेका पशु चिकित्सकले पशु चिकित्सा सम्बन्धि विद्यार्थीहरु, भेटेरीनरी प्रविधि सम्बन्धि विद्यार्थीहरु, चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धि विशेषज्ञ र बैज्ञानिक हरुलाई प्रशिक्षण गर्ने कार्य गर्दछन् । पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व–विद्यालयमा काम गर्ने प्राध्यापकले अनुसंधान, शिक्षण तथा भेटेरीनरी शिक्षण अस्पताल मार्फत पशुपंछिको उपचारमा संलग्न रहने गरेको पाइन्छ । साथै नविनतम ज्ञान र शिपलाई निरन्तर शिक्षा मार्फत पशु चिकित्सकहरुलाई पुर्नताजगी तालिम दिने कार्यमा संलग्न रहन्छन् ।
विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा अनुसंधान गर्ने चिकित्सकहरुले रोग निदान, उपचार तथा रोकथाममा नयाँ प्रविधिको विकास गरी पशु तथा मानव स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने कार्य गर्दछन् । यि पशु चिकित्सकले मानव स्वास्थ्यको वचावटको लागि गरेका धेरै कार्यहरु छन् । जस्तैः मलेरीया र एलो फिवरको रोकथाम, फुड पोइजनिङ, मुटुरोगिको लागि आवश्यक रगत पातलो बनाउने औषधिको विकास, कृत्रिम अंगहरुको विकास, जोनी, हाडहरुको उपचारमा महत्वपूर्ण भुमिका रहेको पाइन्छ । संसारभर सरकारी तथा निजिस्तरमा संचालित अनुसंधान केन्द्रमा कार्य गर्दै क्यान्सर जस्तो घातक रोग, अलजाइमर रोगको अनुसंधानमा पशु चिकित्सकले महत्वपूर्ण भुमिका निभाएको पाइन्छ ।
औषधि बनाउने उधोगहरुमा काम गर्ने पशु चिकित्सकहरुले मानव स्वास्थ्य तथा पशु स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने औषधिको विकास, परीक्षण र निरीक्षण गर्ने कार्य गर्दछन् । पशु चिकित्सा बाहेक यिनिहरुले औषधि विज्ञान, विष विज्ञान, विषाणु विज्ञान, जिवाणु विज्ञान प्रयोगशाला जनावरको औषधि र रोगशास्त्रमा विशेषज्ञता प्राप्त गरी कार्य गरेका छन् । पशु चिकित्सहरु व्यवस्थापन, नियमन निकाय निजि प्रतिष्ठानमा प्राविधिक सल्लाकार, पशुजन्य व्यवसाय घरपालुवा जनावरको खाद्य कम्पनि, रसायन सम्बन्धि उद्योग निजिपरीक्षण प्रयोगशाला, दाना उद्योग पशु पालन उद्योग र कुखुरासम्बन्धि उद्योगमा संलग्न रही महत्वपुर्ण भुमिका निभाएका हुन्छन् ।
घ) औषधि व्यवस्थापन तथा पशु क्वारेन्टाइन कार्य
बाहिरबाट नेपालमा भित्रिने पशुपंछि तथा पशुजन्य पदार्थको ओसार पसारबाट भित्रिने पशु तथा मानवजन्य रोगहरु नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाइन व्यस्थालाई कडा गरी पशुपंन्छिको परीक्षण कार्यमा संलग्न रहन्छन् ।
यिनीहरु विदेशबाट आयत गरीने तथा नेपालभित्र ओसार पसार हुने पशुको जाँच गरी मानव तथा पशुमा लाग्ने रोगहरु जस्तै क्षयरोग, रेविजको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भुमिका निभाएका हुन्छन् । खाद्य सुरक्षाको लागि मानिसले खाने मासु, दुघ, तथा अण्डा जस्ता पशुजन्य प्रोटिनहरु स्वास्थ्य र पोसिलो भए नभएको नियमन गर्ने कार्य गर्दछन् ।
मानवमा देखापर्ने सरुवा रोगहरुमा लगभग ७० प्रतिशत पशुबाट मानिसमा सर्दछन् । तसर्थ पशुचिकित्सकले गोठ देखि ओठसम्म पशुजन्य प्रोटिनलाई स्वस्थ राख्न महत्वपूर्ण भुमिका निभाएका हुन्छन् । खाद्य पदार्थबाट हुने रोगहरु, इन्फ्लुएन्जा र रेविजको प्रकोप फैलेको अवस्थामा अनुसंधान गर्न पशु चिकित्सकले महत्वपूर्ण भुमिका निभाएको हुन्छन् । किटनाशकको प्रभाव, औद्योगिक प्रदुषण, पशु तथा मानवलाई प्रभाव पार्ने पदार्थको अनुसंधानमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छन् । औषधि तथा औषधिजन्य पदार्थ, घरपालुवा जनावरको खाद्य पदार्थ, खाद्यमा प्रयोग हुने पदार्थहरुको सुरक्षा तथा प्रभाव कारीताको पनि परिक्षण गर्ने कार्य गर्दछन् ।
च) सैनिक तथा प्रहरी सेवा
कानुनी व्यवस्था कायम राख्नको लागि प्रयोग हुने घोडा तथा कुकुरको व्यवस्थापन तथा उपचारमा पशुचिकित्सक संलग्न रहेको पाइन्छ । जंगली जनावरको व्यवस्थापन तथा उपचार संसारभर प्राकृतिक रुपमा पाइने ज्यादै महत्वपूर्ण जस्तैः हात्ती, गैडा, गोही, बाघ तथा अन्य लोपन्मुख जंगली जनावरहरुको संरक्षणमा पनि पशु चिकित्सक संलग्न रहेको पाइन्छ ।
साथै पशुपंक्षिको कल्याण, जलचरको व्यवस्थापन तथा उपचारमा संलग्न रहि मानव तथा पशुपंन्छिको स्वास्थमा कार्य गरीरहेका छन् । विश्व एक स्वास्थ्य भन्ने अवधारणबाट मानव तथा पशुमा लाग्ने रोगहरुको व्यवस्थापनमा बदलिदो समयमा पशु चिकित्सकको भुभिका अपरीहार्य रहेको छ ।
छ) कसरी बन्ने त पशु चिकित्सक ?
१२ मा विज्ञान विषय लिई कम्तिमा एउटा बायोलोजी पढेको विद्यार्थीले भेटेरीनरी कलेजमा फर्म भर्न पाउँछन् । नेपालमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको रामपुरमा, त्रिभुवन विश्वविद्यालको पक्लिहवा, रुपन्देहिमा तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त निजिस्तरका नेपाल पोलिटेक्नीक, भरतपुर तथा हिकास्ट, काठमाडौ मा पढ्न सकिन्छ । कडा प्रतिशप्रर्दा हुने हँुदा फिजिक्स, केमेष्ट्रि, जुलोजी, म्याथम्याटिक्समा राम्रो ज्ञान हुन जरुरी छ । स्नातक तहको ५ वर्षे B.V.Sc. & A.H. Degree पुरा गरी सकेपछि मेडिसन, सर्जरी, थेरियो जेनोलोजी, प्याथोलोजी, माइत्रोबायोलोजी तथा पारासाइटोलोजीमा स्नातकोत्तर र विद्यावारीणी तहको अध्ययन नेपालमै गर्न सकिन्छ । नेपालमा स्नातक गरेका पशु चिकित्सकहरु देश तथा विदेशमा रहेर राम्रो अवसर प्राप्त गरी विभिन्न क्षेत्रमा संलग्न रहि कार्य गर्दै आइरहेका छन् ।